Daawo: Jaamacada Simad ee Magaalada Muqdisho oo Maanta Kala Carar uu ka dhacay Kadib Markii ay Gudaha Jaamacada soo galeen Dabley hubeysan oo Ardayday Rasaas ku rideysa( Dhageyso) | Kismaayo24 News Agency
Daawo: Jaamacada Simad ee Magaalada Muqdisho oo Maanta Kala Carar uu ka dhacay Kadib Markii ay Gudaha Jaamacada soo galeen Dabley hubeysan oo Ardayday Rasaas ku rideysa( Dhageyso)
Monday November 28, 2016 - 5:04 under Somali News by Tifaftiraha K24
Rag ku labisan dareeska ciidamada dowladda Soomaaliya oo gaaraya ilaa 6 nin ayaa maanta gudaha u galay xarunta jaamacadda SIMAD ee magaalada Muqdisho, sida uu sheegay guddoomiyaha jaamacadda Daahir Xasan Cabdi.
Guddoomiyaha Jaamacadda oo VOA la hadlay ayaa sheegay in raggan hubeysan ay gudaha u soo galeen jaamacadda iyaga oo xabada ridaya, taasna ay keentay in ardaydu ay qaarkood derbiyada ka boodaan walaacna uu ka dhashay gudaha jaamacadda
Daahir Xasan Cabdi Daahir Carab ayaa sidoo kale sheegay in jaamacadda aysan lahayn wax ilaalo hubeysan ah.
Ardayda jaamacadda ayaa falkaas kadib la arkayey ayaga oo koox koox u taagan, ayna ka muuqato cabsi.
Ciidamada ammaanka ayaa gurmad u sameeyay xarunta Jaamacada SIMAD hase yeeshee lama oga in ay ciidamada ammaanka ay cid u soo qabteen iyo in kale. Mana jiro illaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir
Halkaan Hoose ka Dhageyso Wareysiga Guddoomiyaha Jaamacadda SIMAD
Halkaan Hoose ka Daawo Sawirro laga qaaday Xiliga ay Dableyda gudaha usoo galeen Jaamacada